'भ्रमणबाट अगाडि बढ्नका निम्ति मनोबल बढेको छ' | नयाँ शक्ति नेपाल
'भ्रमणबाट अगाडि बढ्नका निम्ति मनोबल बढेको छ'
२४ असोज २०७५
त्यसपछि हामी उत्तरमा गयौं मिनिसट्टा । उक्त ठाउँ कृषिको विकास र कृषि विश्वविद्यालयका लागि चर्चित छ । त्यहाँ हामीले कृषिको विकास कसरी भइरहेको छ भन्नेबारे अध्ययन गर्‍यौं । त्यसपछि हामी पछिल्लो समय सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको केन्द्र मानिने क्यालिफोर्निया गयौं । सिलिकन भ्याली रहेको उक्त क्षेत्रमा पुगेर हामीले गुगल, फेसबुक, ट्वीटर लगायतका केन्द्रहरुको हामीले अवलोकन गर्‍यौं । क्यालिफोर्निया शिक्षाको लागि पनि निकै विकसित मानिन्छ । युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियामा पुगेर हामीले त्यहाँको शिक्षा पद्धति, प्रणालीबारे अवलोकन गर्‍यौं । सिनेमा उद्योगको केन्द्र मानिने लस एञ्जेल्स पुगेर सिनेमाको पछिल्लो प्रविधिको बारेमा हामीले अवलोकन गर्‍यौं । नजिकै रहेको कोलोराडोमा बनेको हुभर ड्यामको अवलोकन गर्‍यौं । त्यो २०औं शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो बिजुलीको केन्द्र थियो । ठूला पूर्वाधारको विकास गरेर नै अमेरिकाको आजको विकास सम्भव भएको हामीले अनुभूत गर्‍यौं ।
यसका साथै अमेरिकामा रहेका नेपालीहरु जो विभिन्न व्यवसाय, विश्वविद्यालय, अनुसन्धानमा संलग्न हुनुहुन्छ, उहाँहरुसँग पनि हामीले भेटघाट, छलफल र अन्तक्र्रिया गर्‍यौं । नेपालको विकासका निम्ति उहाँहरुको के योगदान हुनसक्छ ? लगायतका विषयहरुमा उहाँहरुसँग गहन छलफल भयो ।
बजारलाई सबैकुरा छाडिदिने पुँजीवादी बाटो र राज्यलाई नै सबैकुरा छाडीदिने साम्यवादी बाटो, यी दुवै बाटोबाट २१औं शताब्दीमा सबैका लागि विकास र समृद्धि सम्भव हुँदैन । हामीलाई लागेको यी कुराहरु उहाँहरुसँग छलफल गर्दा खासगरी एमआइटी र हार्वाड विश्वविश्वालयका चिन्तकहरुसँग जस्तै, ह्वाई नेशन फेल्स्का लेखक ड्यारन एसीम्याग्लु र पछिल्लो मानवशास्त्र र मनोविज्ञानका वेत्ता स्टिफन पिंकरलगायतका चिन्तकहरुसँग कुरा गर्दा २१औं शताब्दीमा विकासको एउटा नयाँ मोडल खोज्न आवश्यक छ र हिजोको पुँजीवाद र साम्यवादभन्दा माथि उठेर विचारकै विकास पनि गर्न आवश्यक छ भन्ने गहिरोसँग अनुभूति भइरहेको थियो, त्यो दिशामा अगाडि बढ्नका निम्ति मनोबल र आत्मबल बढेको अनुभूति भइरहेको छ । किनकी आफ्नो जुन सोच थियो, त्यसलाई वैज्ञानिक चिन्तकहरुले पनि आड दिँदा अगाडि बढ्न बाटो खुल्छ । त्यसअर्थमा, हाम्रो भ्रमण उपयोगी भएको मैले ठानेको छु ।
(बुधबार एक महिना लामो अमेरिका भ्रमणबाट फर्कनुभएका डा. भट्टराईसँग विमानस्थलमा भएको संक्षिप्त कुराकानीमा आधारित)